Ny fandefasana Wizz Air's Abu Dhabi dia manome fifaninanana lafo vidy izay tena ilaina
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny fandefasana Wizz Air's Abu Dhabi dia manome fifaninanana lafo vidy izay tena ilaina
Ny fanombohana an'i Wizz Air dia azo antoka fa hanakorontana ny tsena, manolotra ny sarany mifaninana ary manokatra toerana tsy misy ilana azy
Ny fandefasana ny sandan'ny Abu Dhabi an'ny Wizz Air dia afaka nandoa dividends ho an'ilay mpitatitra mora vidy amin'ny alàlan'ny fidirany amin'ireo tsena tsy dia zahana sy hanohanana ny emirata amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana ny fizahan-tany miditra. Ity fivoarana farany ity dia manamafy ny filan'ny fifaninanana amin'ny vidiny ambany, ary ny zotram-piaramanidina dia hanohana ny fanentanana ny fangatahana fialamboly any UAE mandritra sy aorian'ny COVID-19.
Wizz AirNy fanombohana dia hanakorontana ny tsena, manolotra ny sarany fifaninanana ary manokatra toerana tsy misy ilana azy izay mety hamoa ho an'ny kaompaniam-pitaterana. Abu Dhabi dia tsena iray anjakan'ny mpitatitra asa feno, ary ny Etihad Airways no mpilalao lehibe indrindra. Ny fifaninanana amin'ny lafo vidy dia voafetra ho an'ny kaompaniam-pitaterana miditra, matetika dia mpivady tanàna iray ihany no matetika, ary tena nila fanakorontanana lafo ny tsena.
Araka ny vaovao farany Covid-19 Fanadihadiana momba ny fanarenana, 87% ny valinteny izay nahagaga fa 'tena', 'somary', na 'somary' niahiahy momba ny toe-bolany manokana. Ny fahaizan'ilay mpitatitra mikendry ireo mpandeha mihevitra ny vidiny dia hamela ny tanàna hisambotra tsara kokoa ireo izay mety hijanona noho ny olana ara-bola.
Hanohana ny fizotran'ny fizahantany an'i Abu Dhabi aorian'ny COVID-19 ny Wizz Air. Ny fahafahan'ny zotram-piaramanidina manolotra ny saran-dàlana farany ambany indrindra dia hanampy amin'ny famahana ny fisakanana lehibe indrindra amin'ny fivezivezena. Ny fifandraisan'ny zotram-piaramanidina sy ny fahaizany mamily ny saran-dalan'ny mpifaninana aminy dia mety hampitombo ny fisarihana an'i Abu Dhabi ho toerana fizahan-tany ary mety ho lehibe hanohanana ny ezaka fanarenana ataon'ny emirato. Ity toe-javatra ity dia ho fandresena ho an'ny emirate sy ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, ary afaka mamela ny fizotry ny fotoana fanarenana haingana kokoa ao anatin'izany. Abu Dhabi izao dia mety ho fitaovana tsara kokoa hifaninana amin'ny mpifaninana akaiky azy indrindra - Dubai.
Ny fahombiazan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka any Eropa dia tena hahasoa amin'ny ezaka ataony hanakorontanana ny tsena any Abu Dhabi.
Ny saran-dalana farany ambany indrindra izay natolotry ny kaompaniam-pitaterana dia hamporisika ny fangatahana amin'ny tsena vaovao ary hanome fifaninanana tena ilaina amin'ny làlan'ny saran-dàlana ambony. Ny Wizz Air dia napetraka tsara ho mpitarika ambany vidy, ary ny fidirana amin'ny tsena misy fifaninanana kely vidy dia mety manome valisoa lehibe